नेपाल आज | के भाटभोटेनीमा प्रचण्डले लगानी गरेका हुन ?
बिहिबार, २२ असोज २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाण्डौंको फुटपाथमा नाङ्लोवाट सुरु गरेको ब्यापार दुई दशकमै अरवौंको हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्छ। यसैलाई सत्य मान्य हो भने अन्य सवै क्षेत्र छोडेर मान्छेले ब्यापार नै सुरु गर्ने सोच वनाउन सक्छन्। तर, यो सवैको क्षमताको विषय भने होईन। ब्यापार/ब्यवसायमा चल्न नजान्दा कयौं अरवपती क्षणभरमै कंगाल भएका छन्। ब्यापारमा जो टिकेका छन्, उनीहरुले पनि यो मुकाम रातारात प्राप्त गरेको होईन। त्यो क्षेत्रमा उनीहरुको पुस्तौं वितेको छ।
तर, समय/अवस्थाको विश्लेषण, वदलिदो परिवेशलाई आफनो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमता अनि शक्ति र सत्तामा रहेका मान्छे रिझाउन/प्रभावमा पार्न सक्ने कला छ भने असम्भवलाई पनि सम्भव वनाउन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएको प्रसंग त्यस्तै एक चल्तापुर्ता ब्यापारीको हो, जस्ले नाङ्लोवाट सुरु गरेको ब्यापारलाई २६ वर्ष १ महिनामा अरवौंको वनाएर देखाए ।
मिनवहादुर गुरुङ्ग। खोटाङ्गवाट अध्ययनका लागि धरान झरेका सामान्य नागरिक । धरानको अध्ययन सकेर ०३१ सालमा काठमाण्डौ पसे। अध्ययनकै क्रममा नेपाल बैंकमा जागिर खाए। जागिरिकै क्रममा उनले त्रिभुबन विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस किर्तिपुरबाट अर्थशास्त्रमा एमए पास गरे ।
यस विचमा उनकी पत्नि सावित्री भाटभटेनीमा खुद्रा पसल गर्थिन । सोहि पसलले उनलाई ब्यापार/ब्यवासयमा आकर्षित गर्यो । ०५० सालमा नेपाल बैंकको अधिकृत पदबाट राजीनामा दिए र ०५० भदौ १ गते नक्सालमा भाटभटेनी नामको डिपार्टमेन्टल स्टोर सुरु गरे ।
सधैं सत्ता र शक्तिको नजिक
०४८ सालमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आठौं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउने र खुल्ला बजार अर्थनीतिलाई अबलम्बन गर्ने सिद्धान्त अघि वढाएको थियो । जसले गर्दा गुरुङ्गलाई ब्यवसायमा लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर जुर्यो ।
त्यसपछि सरकारी नीति नियमहरूमा अस्पष्टता, राजनितिक अस्थिरता तथा ०५२ सालमा तत्कालिन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धलाई गुरुङ्गले अवसरको रुपमा प्रयोग गरे । देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल थियो । तर, अरुको ब्यापार/ब्यवसाय चौपट हुँदा पनि गुरुङ्गको ब्यवसाय निरन्तर प्रगतिमै रह्यो। त्यसको प्रमुख कारण हो– राजपरिवार र सत्ता सञ्चालकसँगको सम्वन्ध।
जानकारी अनुसार तत्कालिन युवराज दिपेन्द्रकी प्रेमीका देवयानी राणा किनमेलका लागि भाटभटेनी जान्थिन। गुरुङ्गले यसलाई समेत उपयोग गर्न छोडेनन्। देवयानीको किनमेललाई उनले राजपरिवारसँगको सम्वन्धका रुपमा प्रचार गरे। यस वाहेक सुपर माकेर्टमा राजा–महाराजाका ठुल–ठुला फोटो राखेर राजाको सेवकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरे। जस्ले उनको ब्यापारको संरक्षण र सर्वसाधारणलाई सुपरमार्केटमा आकर्षण वढाएको जानकारहरु वताउँछन् ।
प्रचण्डको लगानी भए/नभए पनि उनको नाम जोडेर चलाईएको हल्लालाई गुरुङ्गले भरपुर उपयोग गरे। प्रहरी र करका कर्मचारी देखि अख्तियारका कर्मचारीसम्म भाटभटेनीको नामवाट डराए । भाटभटेनीले गरिरहेको ब्यापार कस्तो छ भनेर कहिलै खोजी भएन।
प्रचण्ड मात्र होईन, उनी सधैं सत्ता र शक्तिको नजिकमा रहे। कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका ठुला दललाई चन्दा वुझाउने तथा शिर्ष र शक्तिमा रहेका नेताहरुलाई ब्यक्तिगत सहयोग गरेर उनले आफनो प्रभाव वनाई राखेको राजनितिक दलका नेताहरु नै वताउँछन्। सरकार र प्रतिपक्ष आफनो प्रभावमा भएपछि उनको ब्यापार/ब्वसायमा कसैले औला उठाउने हिम्मतसम्म गर्न सकेन। दिन दुई गुणा, रात चार गुणाले उनको ब्यवसाय वढिरह्यो। छोटो समयमा नै ब्यापारका क्षेत्रमा उनको साम्राज्य तयार भयो।
हाल देशका १८ वटा मुख्य शहरहरु मार्फत भाटभटेनीले आफनो ब्यापार संचालन गरिरहेको छ । भाटभटेनी वाहेक महाराजगंज, कोटेश्वर, चुचेपाटी, कृष्णगल्ली, सात डोवाटो, अनामनगर, वालाजु, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, भक्तपुर, पोखरा, धरान, भरतपुर, वुटवल, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंजमा हाल भाटभेनीको ब्यापार चलिरहेको छ ।
शक्तिको दुरुपयोग, नेताको नाम वद्नाम
साना पार्टी छोडौं, देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा रहने कांग्रेस/नेकपामा अहिले पनि गुरुङ्गको पहुच पहिलो पुस्ताका नेता भन्दा कम छैन । ‘म नेता र मन्त्रीभन्दा प्रभावशाली मान्छे हो’ भन्दै पार्टीको दोश्रो पुस्ताका नेता र प्रहरी/प्रशासनका हाकीम थर्काउँछन– गुरुङ्ग।
‘नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल लगायत अधिकांश पार्टीका शिर्ष तथा प्रभावशाली नेतासँग गुरुङ्गको राम्रो पहुँच छ’ नेकपाका एक नेता भन्छन–‘त्यो सवैको कारण हो चन्दा, ब्यक्तिगत सहयोग र उपहार।’
पछिल्लो समय निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलसँगको सम्वन्धका कारण पनि गुरुङ्गको नाम नेकपा भित्र चर्चामा छ। उनीहरुपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि गुरुङ्गले भेटघाटको वाटो वनाएका छन् । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले गुरुङ्ग र ओलीका विचमा सम्पर्क सुत्रको काम गरेको उनीहरुको भनाई छ। स्रोतका अनुसार बिष्णु पौडेल र मिनवहादुरका विचमा गहिरो दोस्ती छ। चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पौडेलका छोरा नविनका नाममा पुगेको आठ आना जग्गाका पछाडि मिनवाहदुरकै हात रहेको उनीहरुको दावी छ ।
‘चन्दाको आडमा शिर्ष नेतासँग वनाएको सम्वन्धकै कारण गुरुङ्गले सवैलाई तर्साउने र थर्काउने गर्छन’ गुरुङ्गका कारण अपमानीत भएका एक नेता भन्छन्–‘प्रहरी र करका हाकिमदेखि लिएर सिडिओसम्म उनीसँग डराउनुको कारण यहि सम्वन्ध हो।’ शिर्ष नेतालाई चन्दा दिएको छु भन्दै अपमानीत गर्ने गरेकै कारण दोस्रो तहका नेताहरु गुरुङ्गसँग क्रुद्ध छन् । ‘म तिमिहरु भन्दा प्रभावसाली मान्छे हो’ भन्दै हिड्ने गरेको उनीहरु वताउँछन् ।
तर, शिर्ष नेताहरुको अगाडि भने उनले घुँडा टेक्ने गरेको नेताहरुको भनाई छ । ‘ओलीसँगको सम्वन्ध नविग्रीयोस भन्नका लागि पिष्णु पौडेलसहित अन्य आसेपासेलाई प्रभावमा परिएको छ’ अर्का नेता भन्छन–‘चन्दा दिने, भान्सामा सामान पुर्याउने र मदिरा वोकेर आफै पुग्नेसम्मका काम भएका छन् ।’